မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အား အကြမ်းဖက်အဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်းကို ဝ ကန့်ကွက်
ဒီဇင်ဘာ ၁၂ ရက်နေ့ နေ့စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်သော UWSA ၏ ကြေညာချက်တွင် ပြည်သူ့လွှတ်တော်၌ အဆိုတင်သွင်းစဉ်ကပင် ပယ်ချခဲ့ပြီးဖြစ်သောကိစ္စအား ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်တွင် ထပ်မံ တင်သွင်းပြီး အတည်ပြုလိုက်ခြင်းသည် “ယုံကြည်မှုများ ဆိုးရွားစွာ ပျက်စီးစေကြောင်း” ဖော်ပြထားသည်။
တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုများတွင် ရိုဟင်ဂျာ မပါဝင်သည့် သမိုင်းကို ရေးသားပြုစုရန် အစိုးရ စီစဉ်နေ
မြန်မာ့သမိုင်း၌ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးနှင့် မျိုးနွယ်စုများတွင် ရိုဟင်ဂျာ စကားလုံးနှင့် အသုံးအနှုန်းကို မည်သည့်အချိန်ကာလကမျှ မရှိခဲ့သည့် ဖြစ်ရပ်မှန်များကို သမိုင်းပညာရှင်များက ရေးသားပြုစုသွားမည်ဟု သာသနာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနက သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
Exploring history on the old Rakhine railway
In 1918, work began onarailway that the British hoped would provideatrade link between the subcontinent and China and its remains are rich with history.
ရခိုင်အရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး အာဆီယံ အရေးပေါ်အစည်းအဝေးကို မြန်မာခေါ်ယူမည်
မြန်မာနိုင်ငံ အနောက်ဘက်ရှိ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် စစ်တပ်၏ စစ်ဆင်ရေးများကြောင့် ပြီးခဲ့သည့် နှစ်လအတွင်း ရိုဟင်ဂျာ ၂၀,၀၀၀ ကျော်မှာ အိမ်နီးချင်း ဘင်္ဂလားဒေရှ့်နိုင်ငံတွင်းသို့ ထွက်ပြေးခဲ့ကြရသည်။
ပြည်ပ၌ ဖွင့်လှစ်ထားသော ဘဏ်စာရင်းများအား ဗဟိုဘဏ် စတင် ကြပ်မတ်
ရန်ကုန်၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၂ ပြည်ပဘဏ်များတွင် ဖွင့်လှစ်ထားသော ဘဏ်စာရင်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ဗဟိုဘဏ်ထံ ဒီဇင်ဘာ ၁၂ ရက်(ယနေ့) နောက်ဆုံးထားတင်ပြရန် ဗဟိုဘဏ်က ဘဏ်အသီးသီးထံ ပြီးခဲ့သော ရက်သတ္တပတ်က ညွှန်ကြားချက် ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။ ထိုထုတ်ပြန်ချက်အရ ပြည်တွင်းဘဏ်အသီးသီးတွင် ဒါရိုက်တာအနေနှင့်ဖြစ်စေ၊ အရာရှိအနေနှင့်ဖြစ်စေ၊ အကြံပေးအနေနှင့်ဖြစ်စေ ဆက်စပ်ပတ်သက်နေသူများသည် ပြည်ပတွင်.
မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အား အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အဖြစ် သတ်မှတ်မှုကို ကချင်ပါတီများ ဝေဖန်
အဆိုပါဆုံးဖြတ်ချက်သည် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် အလှမ်းကွာဝေးစေပြီး မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းဒေသများတွင် ဖြစ်ပွားနေသည့် တိုက်ပွဲများ ပိုမိုအရှိန်မြင့်လာနိုင်သည်ဟု ကချင်ပြည်နယ ်ဒီမိုကရေစီပါတီ၏ တွဲဘက်အတွင်းရေးမှူး ဦးတူးရော်က ဆိုသည်။